Климатик LG UB60/UU61W	Климатик LG UB60/UU61W Климатик LG UB60/UU61W Климатик LG UB60/UU61W 6 299 лв. Климатик LG UB42/UU43W	Климатик LG UB42/UU43W Климатик LG UB42/UU43W Климатик LG UB42/UU43W 5 199 лв. Климатик LG UB18/UU18W	Климатик LG UB18/UU18W Климатик LG UB18/UU18W Климатик LG UB18/UU18W 2 599 лв.
Климатик LG UB30/UU30W	Климатик LG UB30/UU30W Климатик LG UB30/UU30W Климатик LG UB30/UU30W 3 299 лв. Климатик LG UB36/UU36W	Климатик LG UB36/UU36W Климатик LG UB36/UU36W Климатик LG UB36/UU36W 4 199 лв. Климатик LG UB48/UU49W	Климатик LG UB48/UU49W Климатик LG UB48/UU49W Климатик LG UB48/UU49W 5 799 лв.
Климатик LG UB24/UU24W	Климатик LG UB24/UU24W Климатик LG UB24/UU24W Климатик LG UB24/UU24W 2 999 лв.